Izandiso, Izakhi, Amamojula nama-plugins weJoomla! - Izixazululo zeJoomla
Kube-solutions.com Izandiso ze-CMS Joomla!
Ubuchwepheshe bami beJoomla
Joomla noma WordPress?
Dala iwebhusayithi noJoomla
Zingaki izandiso engingazifaka eJoomla?
Iziphi izandiso zokukhetha ukudala amasayithi weJoomla?
Ungayifaka kanjani isandiso noma imodyuli eJoomla?
Shintsha isifanekiso seJoomla
Ungayakha kanjani iwebhusayithi noJoomla?
Imibhalo - Amafayela
Imibhalo - Okubhaliselwe
Imibhalo - Izithombe
Imibhalo - Izaziso ze-imeyili
Imibhalo - Imicimbi
Imibhalo - Imicimbi ekhokhelwayo
Izingxenye, amamojula nama-plugins we-Joomla CMS!
Le module ibonisa iwindi le-modal popup elibuze umsebenzisi ukuthi aqinisekise iminyaka yakhe ngaphambi kokufinyelela ekhasini.
Ikuvumela ukuthi uhlole iminyaka yomsebenzisi ngaphambi kokufinyelela ekhasini eligcinelwe abantu abadala, isibonelo.
Le plugin ivumela abasebenzisi ukushumeka ividiyo ye-Dailymotion kumaphrofayili abo.
Le phakheji yeJoomla kufaka phakathi ingxenye kanye nemodyuli izokuvumela ukuthi ungeze izindawo zokuphawula kunoma yiliphi ikhasi lewebhusayithi yakho.
Le plugin ivumela abasebenzisi ukushumeka ividiyo yeVimeo kuphrofayela yabo.
Le plugin ivumela abasebenzisi ukushumeka ividiyo yeTikTok kuphrofayela yabo.
Leli phakethe lama-plugins ama-2 likuvumela ukuphatha imicimbi evela kuma-athikili kaJoomla.
Le plugin ingeza isigaba se-Biography kumaphrofayela womsebenzisi. Ithandeka kakhulu yokwengeza okuqukethwe okunothile nokufunda kabanzi ngomuntu.
Le plugin ikuvumela ukuthi uxhumanise uhlu lwezithombe kuma-athikili kaJoomla bese uzibonisa ngezansi.
Le plugin ikuvumela ukuthi ungeze isithombe sephrofayela kuma-akhawunti womsebenzisi we-Joomla. Ukufakwa okusheshayo nokumisa.
Le plugin kaJoomla ikuvumela ukuthi uthumele i-athikili noma isingeniso sayo nge-imeyili eqenjini labasebenzisi noma amakheli e-imeyili.
Le plugin ivumela ukuhlanganiswa kwenkinobho ethi "Nikela" kumaphrofayili womsebenzisi.
Le plugin yeJoomla ikuvumela ukuthi usebenzise izindatshana njengamashidi womkhiqizo. Akunasidingo sokufaka isisombululo esinzima nesidla isikhathi se-e-commerce ukulungisa. Le plugin yengeza ukusebenza kokuthenga ngqo kusuka ekuhleleni i-athikili.
Le plugin kaJoomla ivumela abasebenzisi ukushumeka ividiyo ye-YouTube kuphrofayela yabo.
Le plugin ikuvumela ukuthi uxhumanise amafayela kuzindatshana zeJoomla futhi uwanikeze mahhala noma ukhokhelwe ngokulanda nge-plugin eyengeziwe. Imibhalo - Okubhaliselwe.
Le plugin ikuvumela ukuthi uphathe ubudlelwano phakathi kwama-akhawunti womsebenzisi weJoomla.
Wanelisekile noma ubuyiselwe imali
Uma uthenge omunye wemikhiqizo yethu futhi angahambelani nawe, sizibophezela ukukubuyisela ngokugcwele.
I-Apache 2.0 ne +
Nginx 1.0 no +
I-PHP 5.3.10 ne +
MySql 5.1 no +
I-SQL Server 10.50.1600.1 ne +
I-PostgreSQL 8.3.18 ne +
Sebenzisa izindatshana zeJoomla njengamashidi womkhiqizo!
Ukuthuthukiswa kweJoomla! Izandiso
Izandiso nokunikezwa kwazo
Chofoza lapha ukufinyelela isiza sedemo
Ama-plugins: Faka insimu kusuka ku-onContentPrepareForm function
Ungashintsha kanjani isifanekiso seJoomla
Yenza ngezifiso isiza sakho seJoomla ngezandiso ezilula nezikhanyayo!
Thola ekhasini lasekhaya lesiza sami, noma kumamenyu, ukukhetha okubanzi kwezici ezilula nezilula ongazengeza kumawebhusayithi akho e-Joomla. Ungasebenzisa ama-plugins, amamojula nezakhi zami ukucebisa iwebhusayithi yakho, ibhulogi noma i-Ecommerce usebenzisa i-Joomla CMS.
Ngiphinde ngikunikeze izifundo nezifundo ezithile ekusebenziseni iJoomla, njengokuthi ungayisebenzisa kanjani ithempulethi, ungayifaka kanjani i-athikili entsha, ungakha kanjani isitolo, udale amamojula, izibuyekezo nokunye okuningi. Uzokwazi okuningi ngazo zonke izindaba eziqhubekayo futhi uzofika nge-blog yami.
Phakathi kwezinhlelo zokuphatha okuqukethwe ezidume kakhulu njengeDrupal, i-Wordpress, i-Joomla, i-Jimdo, i-Prestashop noma i-Shopify, ngakhetha i-Joomla ukudala amawebhusayithi wami wokubukisa, amabhulogi noma izitolo eziku-inthanethi. Iphaneli yayo yamathempulethi we-css aphendulayo ahambisana nama-smartphone namaphilisi, iJoomla namuhla iyithuluzi elifanele lokwenza iwebhusayithi. Ingabe unayo iphrojekthi futhi ufuna ukuqala ngokushesha? Thola igama lakho lesizinda, ukusingathwa kwewebhu ngokufinyelela kwayo kwe-ftp kumsingathi wakho ozikhethelayo, bese ufaka i-Joomla bese uzivumela ukuthi uqondiswe ngokwezifiso zayo ezilula nezinembile. Uma ungonjiniyela, njengami, ungaya phambili futhi uthuthukise izandiso zakho: izithombe zombukiso wesilayidi, imidwebo yezithombe, islayidi sezithombe, amawijethi, uhlelo lwesaziso, umnikelo we-paypal, umphathi wokubhalisela, umphathi wefayela, uhlelo lokuphatha amazwana, isheke leminyaka, ikhalenda kanye nokuphathwa komcimbi, umkhombandlela, ukuhlanganiswa kwevidiyo, ukuphathwa izikhangiso ezihlukaniswe njll.
NgeJoomla, ukudala iwebhusayithi kuyashesha. Sebenzisa i-interface yayo yokuphatha kanye nabahleli bayo be-WYSIWYG ukucebisa okuqukethwe kwakho, ukuthuthukisa ireferensi yakho yemvelo, ukuvela ezinjini zokusesha, ukuthola ukuchofoza nokwenza ngcono ukuthengisa kwakho.
Elula futhi enembile, uJoomla kimi iCMS enhle kakhulu. Ukudala isiza sakho akukaze kube lula.
Clement, ekhethekile ekwenzeni amasayithi weJoomla
Copyright © 2020 Joomla-Solutions.com - Izandiso, izakhi, amamojula nama-plugins kaJoomla.
Joomla! ® igama lisetshenziswa ngaphansi kwelayisense elilinganiselwe kusuka Izindaba zomthombo ovulekile e-United States nakwamanye amazwe.
Kube-solutions.com ayixhunyanisiwe noma ivunyelwe yi-Open Source Matters noma iJoomla! Iphrojekthi.
I-SEO, ukubhala kweWebhu